ချစ်လျက်နဲ့ ဘာလို့လမ်းခွဲခဲ့တာလဲ တဲ့ ။
ကျွန်မကို လူတချို့ လာမေးကြတယ် နင်ဒီလောက်ချစ်နေတာပဲ သည်းခံလိုက်ပေါ့ အချိန်တန်တော့လဲ သူ အမှန်မြင်လာပါဆိုပြီး လာပြောကြတဲ့ လူတွေလဲရှိတယ် ။ ကျွန်မ ဘာဆို ဘာကို မှ မဖြေခဲ့ဘူး မဖြေချင်ခဲ့လို့မဟုတ်ပဲ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို ပြောပြဖို့မဝံ့ရဲခဲ့တာပါ
ကျွန်မ . . .သူ့ကို သိပ်ချစ်တာပေ့ါ . .မာနသိပ်ကြီးတဲ့မိန်းမက သူ့အနားမှာရောက်ရင် အဆိပ်မရှိတဲ့ ရေမြွေလေးလိုပဲ ။မာနတွေထားဖို့သတိမရခဲ့ဘူး မာနတွေ ထုတ်ပြဖို့လဲ မလိုဘူးလို့ထင်ခဲ့တာပါ ။
ကျွန်မ သူ့ကို သိပ်ချစ်တာပေါ့ . .ပစ်ထားတဲ့အခါတောင် မအားလို့နေမှာပါလို့တွေးပြီး မျက်ရည်နဲ့ အဖော်ပြုခဲ့ရလည်း သူ့အပေါ်နည်းနည်းလေးမှ မငြိုငြင်ခဲ့ဖူးဘူး သူ့ဘက်က ဖုန်းမဆက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က စပြီးခေါ်လိုက်တယ် သူ့ဘက်က မကိုင်တဲ့အခါ မျက်ရည်ကျတယ် ဒီလောက်နဲ့ပဲ ပြီးပါတယ် အနောက်မှာ စိတ်ဆိုးတာတွေ စိတ်ကောက်တာတွေ ဘာတစ်ခုမှ မပါလာဘူး သူဖုန်းဆက်တယ်အခါ ကျွန်မ အပြေးအလွှားကိုင်ဖို့လဲ မရှက်ခဲ့မိဘူး
ကျွန်မ သူ့ကို သိပ်ချစ်တာပေါ့ . . .ကျွန်မ လိုချင်တာရှိတဲ့အခါတောင် သူအဆင်မပြေမှာ စိုးတဲ့စိတ်နဲ့ မပူဆာမိခဲ့ဘူး ပူလဲမပူဆာခဲ့ဖူးဘူး မျက်နှာလေးညှိုးသွားမှာကိုက အစ အဆင်မပြေဖြစ်မှာအဆုံး ကျွန်မ အားလုံးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ နေခဲ့တာပါ
ဒါပေမယ့် .. . . ကျွန်မ ပေါပေါပဲပဲ ပေးခဲ့မိတဲ့အချစ်တွေကို တန်ဖိုး ထားရကောင်းမှန်းနားမလည်ဘူး ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူရဲ့ ပြန်ပြီး ဂရုစိုက်ခံချင်တဲ့စိတ်ကို နဲနဲလေးမှ မသိတတ်ခဲ့ဘူး ။ သူ့ဘက်အရင် သတိတရလေးဖုန်းခေါ်ဖို့လဲ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်လေ ။ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဖုန်းလေးကိုင်ပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ အိပ်ခဲ့ရတဲ့ ညတွေလဲ များပြီ
ကျွန်မသူ့ကို သိပ်ချစ်တာပေါ့ . . . ဒါပေမယ့် အချစ်တစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်တည်းကချည်း ချစ်နေရုံနဲ့ပြီးပြည့်စုံလာမှာမှ မဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်မှုလေးတွေ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ် ကျွန်မ သူ့ကိုစချစ်မိကတည်းက တစ်နေ့ ဒီလို လမ်းခွဲရလိမ့်မယ်လို့တွေးတောင် မတွေးရဲခဲ့ဖူးဘူး ကျွန်မကို ဒဏ်ရာတွေကပဲ သင်ပေးခဲ့တာပါ ။
သူသာ နဲနဲလေးသာ ပြန်ပြီး ငဲ့ကြည့်တတ်ခဲ့ရင် ကျွန်မ သူ့လက်ကို လွှတ်ဖို့တွေးခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး သူသာ ကျွန်မ မျှော်နေတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းလေးတွေ ဆက်လေ့ဆက်ထ ရှိခဲ့ရင် ကျွန်မ သူ့ရဲ့အဝေးကို ပြေးနိုင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး ကျွန်မ ဘာလို့လမ်းခွဲခဲ့လဲ တဲ့ ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်မ ဖြေနိုင်ပြီ ထင်ပါတယ်
နှလုံးသားမှာ ဒဏ်ရာတွေချည်းပဲ ထပ်လာလို့ပါ သွေးမတိတ်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေအပေါ် ထပ်ပြီး ဒဏ်ရာတွေပဲ တင်လာတော့ကျွန်မ တဖြေးဖြေးနဲ့ ခံနိုင်ရည်အင်အား မဲ့လာခဲ့တာ ပြီးတော့ကျွန်မ က သူ့အတွက် လူပိုလို့ပဲ မြင်လာခဲ့တယ်လေ တစ်ဖက်က မလိုအပ်ပဲ ကျွန်မကချည်း အတင်းတွယ်ကပ်နေသလို ဖြစ်နေလို့ကျွန်မ လှည့်ထွက်ခဲ့တာပါ သိပ်ချစ်ရဲ့နဲ့ပေါ့ ။
ကြၽန္မ . . .သူ႔ကို သိပ္ခ်စ္တာေပ့ါ . .မာနသိပ္ႀကီးတဲ့မိန္းမက သူ႔အနားမွာေရာက္ရင္ အဆိပ္မရွိတဲ့ ေရေႁမြေလးလိုပဲ ။မာနေတြထားဖို႔သတိမရခဲ့ဘူး မာနေတြ ထုတ္ျပဖို႔လဲ မလိုဘူးလို႔ထင္ခဲ့တာပါ ။
ကြၽန္မ သူ႔ကို သိပ္ခ်စ္တာေပါ့ . .ပစ္ထားတဲ့အခါေတာင္ မအားလို႔ေနမွာပါလို႔ေတြးၿပီး မ်က္ရည္နဲ႔ အေဖာ္ျပဳခဲ့ရလည္း သူ႔အေပၚနည္းနည္းေလးမွ မၿငိဳျငင္ခဲ့ဖူးဘူး သူ႔ဘက္က ဖုန္းမဆက္တဲ့အခါ ကိုယ့္ဘက္က စၿပီးေခၚလိုက္တယ္ သူ႔ဘက္က မကိုင္တဲ့အခါ မ်က္ရည္က်တယ္ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ၿပီးပါတယ္ အေနာက္မွာ စိတ္ဆိုးတာေတြ စိတ္ေကာက္တာေတြ ဘာတစ္ခုမွ မပါလာဘူး သူဖုန္းဆက္တယ္အခါ ကြၽန္မ အေျပးအလႊားကိုင္ဖို႔လဲ မရွက္ခဲ့မိဘူး
ကြၽန္မသူ႔ကို သိပ္ခ်စ္တာေပါ့ . . . ဒါေပမယ့္ အခ်စ္တစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္တည္းကခ်ည္း ခ်စ္ေန႐ုံနဲ႔ၿပီးျပည့္စုံလာမွာမွ မဟုတ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈေလးေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္ ကြၽန္မ သူ႔ကိုစခ်စ္မိကတည္းက တစ္ေန႔ ဒီလို လမ္းခြဲရလိမ့္မယ္လို႔ေတြးေတာင္ မေတြးရဲခဲ့ဖူးဘူး ကြၽန္မကို ဒဏ္ရာေတြကပဲ သင္ေပးခဲ့တာပါ ။
သူသာ နဲနဲေလးသာ ျပန္ၿပီး ငဲ့ၾကည့္တတ္ခဲ့ရင္ ကြၽန္မ သူ႔လက္ကို လႊတ္ဖို႔ေတြးခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး သူသာ ကြၽန္မ ေမွ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖုန္းေလးေတြ ဆက္ေလ့ဆက္ထ ရွိခဲ့ရင္ ကြၽန္မ သူ႔ရဲ႕အေဝးကို ေျပးႏိုင္ခဲ့မွာ မဟုတ္ဘူး ကြၽန္မ ဘာလို႔လမ္းခြဲခဲ့လဲ တဲ့ ဒီေမးခြန္းကို ကြၽန္မ ေျဖႏိုင္ၿပီ ထင္ပါတယ္
ကျွန်မ . . . မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ သို့သော် မာယာတွေ မသုံးတတ်တဲ့ ခပ်တုံးတုံး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပေါ့